संविधानको मर्म र भावनाअनुसार सरकार चल्नुपर्ने गच्छदारको सुझाव
विराटनगर, ८ कार्तिक । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार सरकार चल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
काठमाडौं, ८ कार्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रक्सौल–काठमाडौं, रसुवागढी–काठमाडौँ र पूर्वपश्चिम रेलको सर्भेक्षण भइरहेको बताएका छन् ।
भाकपा माक्र्सवादीका महासचिव यचुरी काठमाडौं आउने
काठमाडौँ, ७ कार्तिक । पश्चिम बंगालमा लामो समय सत्तामा रहेको भाकपा (माक्र्सवादी) का महासचिव सीताराम यचुरी यसै हप्ता काठमाडौँ आउने भएका छन् ।
प्रदेश प्रहरी ऐन देखाउनका लागि ल्याएका होइनौं, कार्यान्वयन गर्छौ : मुख्यमन्त्री राउत
काठमाडौं, ७ कार्तिक । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मो.लालबाबु राउत गद्दीले प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने दाबी गरेका छन् ।
जनकपुरधाम, ६ कार्तिक । प्रदेश प्रहरी ऐनप्रति केन्द्रको असन्तुष्टि रहेको बेला प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउत गद्दीले कर्मचारीको अभावका आफूहरुले काम नसकिरहेको भन्दै अब करार ऐन पास गरेर कर्मचारी पूर्ति गर्ने बताएका छन् ।
प्रदेश प्रहरी ऐनप्रति प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाउँदै भने, ‘केन्द्रलाई ओभरटेक गर्ने प्रयास नगर्नुस्’
जनकपुरधाम, ६ कार्तिक । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश २ को प्रहरी ऐनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
एक हप्ताभित्र भुक्तानी नदिए घनघोर आन्दोलन गर्ने उखु किसानको चेतावनी
सर्लाही, ६ कार्तिक । सर्लाही जिल्लाका उखु किसानहरुले भुक्तानीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
कृष्णनगरको घटनाका दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ : पठान
कपिलवस्तु, ६ कार्तिक । कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका कृष्णनगरमा शुक्रबार राति माँँ दुर्गाको मूर्ति बिसर्जनको कार्यक्रम थियो ।
तुलसीपुर, ६ कार्तिक । प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले जिल्लाको विकास र समृद्धिका लागि सबैको साझा एजेण्डा हुनुपर्ने बताएका छन् ।
दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई निरर्थक हुन नदिन गम्भीर बन्नुपर्छ : उपसभापति निधि
विराटनगर, ५ कार्तिक । नेपाली कांग्र्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले वर्तमान सरकार दुई तिहाइ बहुमतको भएकाले यसलाई निरर्थक हुन नदिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन् ।
भविष्य सुरक्षित नभएपछि खेल छोड्न बाध्य : मुख्यमन्त्री राउत
पर्सा, ३ कार्तिक । प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले खेलकूदको विकासका लागि राज्यले आवश्यक लगानी नगर्दा प्रतिभावान खेलाडीसमेत खेल जीवनबाट पलायन हुन बाध्य भएको बताएका छन् ।
महोत्तरी, २ कार्तिक । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्र यादवले अबको विकास पूर्वाधारका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चारमा केन्द्रित हुनपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मौलिकता हराउँदै गइरहेको छ : सांसद यादव
राम नारायण पंडित, सिरहा, १ कार्तिक । नयाँ पुस्तामा देखिएको कुसंस्कारले मौलिकता हराउँदै गएको सिरहा क्षेत्र नं. ४ का सांसद राजकिशोर यादबले बताएका छन् ।
मधेशी जनताको भावनाबमोजिम संविधान संशोधन गर्न सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ : भण्डारी
जनकपुरधाम, ३० असोज । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्षमण्डलका नेता शरत्सिंह भण्डारीले मधेश र मधेशी जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
धनुषा, ३० असोज । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुविर महासेठले मधेशको विकास नभएसम्म समग्र देशको विकास सम्भव नरहेको बताएका छन् ।